Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1309
Tsy lefy, tsy resy…
Par Taratra sur 25/02/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola ho ela angamba. Tsy tena mbola tafarina ary mbola miaina tanteraka anaty fahantrana ny firenena malagasy ankehitriny. Eny, fa na efa tafajoro nandritra ny roa taona aza ny Repoblika fahefatra. Inona marina lehiretsy no mampihisatra ny fampandrosoana eto amin’ity Madagasikara malalantsika ity a? Raha ny hita maso sy ny azo tsapain-tanana aloha, tsy mbola […]
Valin-kafatra ho an’ny ATPMS : “Tsy mihatra amin’i Etazonia ny ACD”, hoy ny masoivoho
Par Taratra sur 25/02/2016 Divers, NS Malagasy
Nandiso avy hatrany ny filazan’ny orinasa Associated Transport and Port Management System (ATPMS) ny masoivoho amerikanina. Araka ny fanambarana ofisialy, navoakany, omaly, fa “manao fanambarana ny masoivoho ho fanitsiana ny filazana diso momba ny ny rafitra Advance Cargo Declaration (ACD). Etazonia dia tsy mitaky rafitra ACD mitovy amin’izay apetraky ny ATPMS amin’ireo entana izay halefa […]
Par Taratra sur 25/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Mpianatra efa ho anarivony amin’ny kolejy sy lycée (miankina sy tsy mpiankina amin’ny fanjakana) 80, ao anatin’ny Fari-piadidian’ny fampianarana (Dren) 14 eto amin’ny Nosy izao no fantatra fa tratran’ny aretina ambalavelona. Ahina ho voahelingelina ny fizotry ny fampianarana amin’ny sekoly maro eto amin’ny Nosy. Fantatra, omaly, nandritra ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana, natao tetsy amin’ny FJKM […]
Rugby – «Mada 2016» : tsy miova ny datin’ny fifaninanana
Par Taratra sur 24/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nambaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny federasiona fa tsy miova, na ny alahady 6 marsa ho avy izao, ny fotoana hanombohan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara na ny «Top 8 Mada », eo amin’ny taranja rugby, ho an’ny sokajy «Elite 1 D1». Efa nandeha be mantsy ny resaka fa voatery haroso amin’ny faran’ny herinandro izao, izany saingy nohamafisin’ny […]
Taom-baovao : manomboka ny fety aman-danonana
Par Taratra sur 24/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Mahavelom-bolo ! Toy ny amin’ny taom-baovaon’ny tandrefana (ny 31 desambra hifoha 1 janoary), efa manomboka misy ny fety aman-danonana hoenti-miara-manamarika ny Taom-baovao malagasy. Tsikaritra izany amin’ity taona ity raha mitaha ny tamin’ny teo aloha. Singanina manokana àry ny « Asaramanitra, taom-baovaon’ny ambanilanitra fokonolona malagasy », karakarain’ny tarika Rary sy ny Vazimba Mpanazari. Hotanterahina ny 7 marsa izao, izany […]
Ligue des champions : tsy mbola naharesy ny Atletico ny PSV Eindhoven
Par Taratra sur 24/02/2016 Divers, NS Malagasy
Fihaonana andrasan’ny rehetra, amin’ity alarobia ity, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions 2016”, ny lalaon’ireo ekipa tsy dia mifandona matetika. Anisan’izany ny an’ny PSV Eindhoven sy ny Atletico de Madrid. Fihaonana roa no hanakatona ny lalao mandroso amin’ny dingan’ny ampahavalon-dalana mandroso, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions […]
Basikety – Coupe du Président : hifampitana amin’ny N1A ireo tafavoaka Zones
Ady goavana. Ekipa 12 no indray hikatroka ny “Play-off” amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, taranja basikety. Hetsika hotanterahina any Mahajanga, ao amin’ny kianja mitafo vaovao, ny 27 febroary – 6 marsa izao. Araka ny efa fantatra, ekipa valo ireo tafavoaka tamin’ny fifanintsanana tamin’ireo Zones efatra (Nord, Centre, Ouest, Sud). Izany hoe, ireo ekipa mitana […]
Cross country – Afrique 2016 : tsy handray anjara indray i Madagasikara
Hotanterahina any Yaoundé, Kameronina, ny 12 marsa izao, ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny cross country. Raha ny vaovao voaray anefa, tsy handray anjara amin’ity hetsika iraisam-pirenena goavana aty Afrika ity i Madagasikara. Antony goavana tsy handraisantsika anjara ny tsy fisian’ny hoenti-manana amin’ny fiampitana sy ny vola haloa amin’ny fandraisana anjara amin’izany. Marihina mantsy […]
Vazo miteny : hiray sehatra i Nantenaina sy Belahy
Nantenaina, fantatra amin’ireo hira maro karazana, mahitsy fiantoraka tsindraindray. Belahy kosa, diso fantatry ny maro fa anisan’ireo mpivoy ny vazo miteny, ary tena tsy mitsitsy tononkira ho any amin’izay iantefany… Fantatra fa hiray sehatra izy mirahalahy ireto, mandritra ny seho iray izay hotontosaina eny amin’ny Telozoro Andrefan’Ambohijanahary, ny 26 febroary izao. Inona ny anton’ny fiarahana? […]
Belo Tsiribihina : tonga ny APMF manaraka akaiky ny fitaterana an-dranomamy
Par Taratra sur 24/02/2016 Economie, NS Malagasy
Tafapetraka any amin’ny distrikan’i Belo ambonin’i Tsiribihina, ankehitriny, ny biraon’ny APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) ny 22 febroary teo. Hiasa any an-toerana izany masoivoho izany handrindra ny fifamoivoizana an-dranomamy. Harahi-maso akaiky izao ny fifamoizana an-dranomamy sahanin’ny APMF any Belo ambonin’i Tsiribihina. Antony iray lehibe koa ny hisorohana ny loza amin’ny alalan’ny fanaraha-maso sy fampanarahana […]
Namakia Soalala : Angonoky iray tratra saika nisy hanondrana
Sokatra angonoky iray efa maherin’ny 30 taona, saika nisy hanondrana no tratran’ny mpitandro filaminana tao Namakia, ny 18 febroary teo. Nahatratra ity sokatra ity tao anaty gony iray nisy nanipy amoron-dàlana ny zandary. Tonga avy hatrany ireo tompon’andraikitry ny tontolo iainana sy ny talen’ny valan-javaboahary ao amin’ny helodranon’i Baly, Soalala, raha vao naharay ny antson’ireo […]
Tanora tsy tara – Scooter : miverina indray ny “courses sauvages”
Par Taratra sur 24/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsy mety fay. Efa matetika mamoa-doza ny scooter eto amintsika, maro koa anefa ireo mpilalao scooter tsy mivaky loha amin’izany. Miverina indray mantsy ny “courses sauvages” eo amin’ny môtô scooter. Tsy ara-dalàna. Efa nandraisana fepetra tany aloha ny fanaovan’ireo mpilalao môtô scooter fifaninanana tsy ara-dalàna. Nihalefy tsikelikely anefa ilay fepetra ka nampirongatra indray, tao anatin’ny […]
20%-n’ny tanora mifoka avokoa : tsy nitohy ny ezaka vita amin’ny ady amin’ny sigara
Mahatsapa ny Vovonana miady amin’ny sigara sy paraky fa mihemotra ny ady amin’ireo zava mahadomelina roa ireo eto amintsika tao anatin’ny herintaona. Ifandrombonan’ny ONG, mpitsara, mpanao gazety… ny Vovonana. Tsy misy intsony ny fanentanana samihafa sy ny fanaraha-maso ny fampiharana ny lalàna samihafa efa manan-kery. Ohatra iray amin’izany ny fijerena ny fanajana ny tsy tokony […]
Tsidi-bohitra : raikitra ny fitaingenana lakana
Mampitaintaina saingy mahafinaritra ny « rafting » na ny fitaingenana lakana amin’ny ranomahery, iray amin’ireo fomba fitsidiham-bohitra karakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), indroa isam-bolana. Manaporofo izany ny fahamaroan’ny mpandray anjara isaky ny misy ity hetsika ity. Raikitra indray àry ny fidinana ny reniranon’i Katsaoka, manomboka eo amin’ny 20km, manaraka iny lalam-pirenena voalohany iny, ny asabotsy […]
Toamasina : sarona ny mpisandoka ho mpiasan’ny hetra
Saron’ny polisin’ny Fip tao Toamasina, afakomaly, ny raim-pianakaviana iray voarohirohy ho mpanao taratasim-panjakana hosoka. Roa lahy izy ireo no miara-manao izany, saingy tafaporitsaka kosa ny iray nandritra ny fotoana nisamboran’ny polisy azy. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny polisy misahana ny fikarohana heloka bevava, ny kaomisera divizionera, Ramilison Celéstin, tranom-pivarotana maromaro no efa fantatra hatreto fa nahazoan’izy […]
Parlemantera any Sofia : « Ampihorohoroana ireo ben’ny Tanàna »
Par Taratra sur 24/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nampiaka-peo sady hentitra. « Very tanteraka ny demokrasia ary tsy voahaja ny fanjakana tan-dalàna. Mbola manjaka tanteraka ny fampihorohoroana any amin’ny faritra Sofia vokatry ny fifidianana loholona natao farany teo. Mbola hampihorohorona hosoloina PDS avokoa ireo ben’ny Tanàna tsy nifidy ny kandidam-panjakana », hoy ireo depiote sy loholona voafidy any amin’ny faritra Sofia tetsy Tsimbazaza, omaly. Nitarika […]
Fampisehoana : hiverina an-tsehatra i Honoré
Ny taona 1993, fantatra sy nisongadina tamin’ilay hira « Tsy misy miala eo Rasta » i Honoré. Sanganasany anisan’ny nahatety vanim-potoana maro tokoa. Tsy afaka am-bavan’olona maro. Fantatra fa hiverina an-tsehatra ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity. Vazo vao mafana hoentiny manamarika izao fiverenany an-tsehatra izao ny « Hiova » izay efa vita rakitsary tazana any amin’ny […]
Andron’ny vehivavy : tsy mitsahatra ny ady ho amin’ny miralenta
“Andeha hanao dingana ho fampimiràna lenta ny lahy sy ny vavy”. Io no lohahevitra hovoizina mandritra ny fanamarihana ny andron’ny vehivavy amin’ny 8 marsa izao manerana ny Nosy. Tanjona ny hanamafy ny ady amin’ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy. Eto Madagasikara, mbola betsaka ny antony tsy mahatomombana ny miralenta. Anisan’izany ny fomban-drazana izay […]
Tao anatin’ny herintaona : 54 ny fahazoan-dalana hamily fiara nosintonina
Ho fanatsarana ny fandaminana ny fifamoivozana eto Antananarivo Renivohitra, nampiofana ireo polisy monisipaly ny vaomiera manokana miandraikitra ny fisintonana ny taratasy fahazoan-dalana hamily. Nitarika ny fiofanana ny prefektoran’ny polisy, ny kolonely Randriamanjarisoa Robert. Efa nitsangana tamin’ny 20 febroary 2015 araka ny lalàna laharana 004-2015 ny vaomiera miandraikitra ny fisintonana ny fahazoan-dalana hamily. Ahitana ny filohan’ny […]
Rotsak’orana : mila mitandrina Antananarivo
Nandefa fanambarana fampitandremana amin’ny ora-mikija ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Nanomboka omaly ary hitohy hatramin’ny rahampitso ny rotsak’orana betsaka ho an’ny faritra afovoany atsinanana iray manontolo. Filazana mena, loza mihatra ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany, Mahanoro, Anosibe an’ala. Filazana mavo, loza mitatao ho an’ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Maitso, milaza fampitandremana […]
Birao maharitry ny Antenimierandoholona : tsy fantatra na haverina na tsia ny fifidianana
Ela ny ela, namoaka ny fanapahan-keviny momba ny fitsipika anatiny eo anivon’ny Antenimierandoholona ny HCC. Tsy fantatra na haverina na tsia ny fifidianana birao maharitra… Ny fitsipika anatiny ambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ihany no manankery amin’ny fifidianana ireo mpikamban’ny birao maharitra sy ny fandrafetana ireo vaomiera eo anivon’ny Antenimierandoholona. Anisan’ny fanazavan’ny HCC […]
Hampitovy fijery ny Firaisamonina sivily
Fampiraisana ny firaisamonina sivily rehetra; hampitovy fijery amin’ny fampanjakana ny demokrasia, ny tany tan-dalàna, ny zon’olombelona… Anisan’ny tanjona amin’ny famolavolana ny Dina mifehy ny asa aman’andraikitry ny firaisamonina sivily malagasy ireo. Nampahafantarina teny Anosy, omaly, ny fahavitan’izay volavolana dina izay, ary natolotra ireo firaisamonina sivily. Enim-bolana ny nandrafetana azy, izay misy andininy 187. Nandray anjara […]
Par Taratra sur 24/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Hanao tatitry ny asany ireo eo anivon’ny komitin’ny manampahaizana, namolavola ny lalàna hifehy ny FFM. Hotanterahina etsy Antaninarenina izany ary hampahafantarina ny mpanao gazety. Tsiahivina fa anisan’ny tolokevitra ao ny hampihenana ny isan’ireo ho mpikambana amin’ity rafitry ny fampihavanana ity, rehefa hijoro. Nilaza ny tsy tokony hirotorotoana amin’ny fifidianam-paritra i Tabera Randriamanantsoa, araka ny nambarany […]
Ampasapito : nihotsaka ny sisin-dalana, fiara 4×4 iray latsaka tany anaty tevana
Fiara 4×4 iray no latsaka tany anaty tevana vokatry ny fihotsahan’ny sisin-dalana teny Ampasapito,omaly. Tsy nisy ny aina nafoy fa potika ilay fiara… Vokatry ny fihotsahan’ny sisin-dalana nipetrahan’ilay fiara 4×4 no nahatonga ny loza, araka ny fanazavan’ireo olona nahita ny zava-nitranga teny an-toerana. Manoloana ny CEG no nitrangan’ny loza. Efa nisy triatra ny sisin-dalana […]
Mitohy ny famotorana manodidina ny famonoana ilay teratany Frantsay sy ny vadiny tany Antsiranana amin’izao fotoana izao. Efa am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny miaramila taloha iray anaovana fanadihadiana. Fantatra fa nisy ihany koa ny mpitandro filaminana nanaovana famotorana tamin’ity raharaha ity. Nisy namono tao an-tranony izy mivady, raha tsiahivina ny herinandro lasa teo. Nitifitra azy ireo […]
« Précédent 1 … 1 307 1 308 1 309 1 310 1 311 … 1 358 Suivant »